विराटनगरबाट प्रकाशित हुँदै आएको उद्‌‌घोष दैनिकको १५ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा दिव्यराज–ललितादेवी दाहाल सामाजिक सम्मान सामाजिक अभियन्ता सीता शर्मालाई प्रदान गरिएको छ । हरेक तीन वर्षमा उद्‌घोष दैनिकको वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रदान गरिदै आएको ५१ हजार १ सय १५ रुपैयाँ राशीको उक्त सम्मान र सम्मान पत्र शर्मालाई प्रदान गरिएको हो ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को मुखैमा केही चिनियाँ शिक्षक र विद्यार्थीहरूले नेपाल चिनाउने पुस्तक चिनियाँमाझ सार्वजनिक गरेका छन्। गत बिहीबार बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी चाइना युथ प्रकाशन गृहले नेपाली विशेषता झल्काउने ‘निपोअर त सिङ् क’ नामक पुस्तक सार्वजनिक गरेको हो।
रोल्पाको चिनारी युद्धको प्रसंगबिना अपुरो रहन्छ । माओवादी सशस्त्र विद्रोहको केन्द्र थियो कुनै समय रोल्पा । युद्धपछि सत्तामा पुगेकाहरूले चाहिँ यो थलोलाई कसरी हेरिरहेका छन् अनि अहिले यहाँको आम मनोविज्ञान कस्तो छ ?
‘सहज काम त सबैले गर्छन्, चुनौतीपूर्ण काम गर्न पो मजा,’ आख्यानकार तर्कना शर्माले आफ्नो पहिलो उपन्यास ‘जेब्रा क्रस’ चुनौतीपूर्ण विषय भएको सुरुमै बताइन् ।
कवि बैरागी काइँला (तीलविक्रम नेम्बाङ) लाई जगदम्बा श्री पुरस्कारका लागि छनोट गरिएको छ । मदन पुरस्कार गुठीको आइतबार बसेको साधारणसभाले तेस्रो आयाम साहित्यिक अभियानका प्रारम्भकर्तामध्येका एक काइँलालाई उक्त पुरस्कार दिने निर्णय गरेको हो ।
तेन्जिन डोमा लामा जन्मभूमि हुम्लाबाट अमेरिकातिर सरेको झन्डै एक दशक बितिसक्यो । बितेका वर्षहरूमा उनी पश्चिमा संस्कृतिसित धेरै घुलमिल भइसकेकी छन् ।
महिला हिंसाका घटना दैनिक रूपमा बढिरहेका छन् । आफ्नै आफन्तजनबाट नै कैयौं महिला पीडित छन् । हिंसापछि त्यस्ता महिला मनोवैज्ञानिक रूपमा कतिसम्म बिछिप्त हुन्छन् ? मानसिक द्वन्द्वका यिनै पक्षहरुलाई केन्द्रमा राखेर साहित्यकार उषा शेरचनले उपन्यास ‘आधि’ लेखकी छन् ।
नेपाल लिटरचेर फेस्टिभलको आठौँ संस्करण आउँदो मंसिर २७ देखि ३० गतेसम्म पोखरामा हुने आइतबार बुकवर्म फाउन्डेसनले बताइएको छ ।
राजकुमार सिद्धार्थ सेतो हात्तीका रूपमा कसरी गर्भ प्रवेश गरे ? गृहत्याग गर्नुअघि छोरा र पत्नी सुतेको कसरी हेर्न पुगे ? अनोमा नदीपारि पुगेर केश काटेर कसरी भिक्षु भेष धारण गरे ? यी र यस्तै कतिपय प्रश्नको उत्तर अब सचित्र पुस्तकबाट मिल्ने भएको छ ।
‘आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार–२०७६’ घोषणा गरिएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज)ले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको ‘आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार–२०७६’ बाट पत्रकार कौशल चेम्जोङ (रेडियो), राजबहादुर गुरुङ (अनलाइन), गणेश राई (छापा) र शोभा श्रेष्ठ (टेलिभिजन) पुरस्कृत हुने भएका छन् ।